Muxuu yahay qorshaha Kooxda Arsenal ee ku aaddan Mustaqbalka Bukayo Saka? – Gool FM
(London) 30 Maajo 2020. Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inay kalsooni ku qabto inay Bukayo Saka u gacan galineyso qandaraas cusub oo waqti dheer ah uu ku joogo garoonka Emirates.
18-jirkaan ayaa ku raaxeystay olole heer sare ah oo uu ku qaadanaayo Waqooyiga London, isagoo diiwaanka ku qortay saddex gool, sidoo kalena sagaal gool caawiyay dhammaan tartammada oo dhan, taas oo ka dhigan inuu bandhig cajiib ah uu ku jiro laacibkan.
Si kastaba ha noqotee, mustaqbalka Saka ee kooxda Arsenal ayaa noqday mid la isla dhexmarayay dhawaanahan, laakiin Gunners ayaa la sheegayaa inay ku rajo weyn tahay inay kureygan mustaqbalka wanaagsan ku leh garoonka Emirates sii heysato.
Sida laga soo xigtay qoraaga kubada cagta ee James Benge, Saka ayaan wali qallinka ugu duugin heshiis cusub kooxda Arsenal, laakiin kooxda Mikel Arteta ayaa kalsooni ku qabta in ninka Ingiriiska ah uu mustaqbalkiisa u hibeyn doono Gunners.
Benge ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay warbixinno hore oo sheegayay in kooxda Arteta aysan dooneynin inay la soo wareegaan Philippe Coutinho xagaagan, waxaana suuragal ah inay u dhaqaaqdo xiddiga khadka dhexe ee Atletico Madrid, Thomas Partey, inkastoo la kulmayaan caqabad dhanka dhaqaalaha oo uu sabab u noqday faafaha COVID 19.
Qandaraaska uu haatan Saka kula jiro kooxda Arsenal ayaa dhacaya xagaaga soo socda, iyadoo Liverpool iyo Valencia ay labadooduba isha ku hayaan horumarka da’yarkaan.